Todo eReaders bụ websaịtị hibere na 2012, mgbe amabeghị ndị na-agụ ebook nke ọma ma ọ bụ bụrụ ndị ama ama na afọ ndị a niile ọ bụrụla ntụaka n'ime ụwa nke ndị na-agụ kọmputa. Ebe nrụọrụ weebụ ebe enwere ike ịgwa gị banyere akụkọ kachasị ọhụrụ na ụwa nke eReaders, mmalite ọhụụ nke ụdị dị mkpa dị ka Amazon Kindle na Kobo na ndị ọzọ amachaghị dịka Bq, Likebook, wdg.
Anyị mezue ọdịnaya na ọkachamara ngwaọrụ analysis. Anyị nwalere eReaders nke ọma izu iji kọọ ezigbo ahụmịhe nke ịgụ akwụkwọ na nke ọ bụla n’ime ha. E nwere ihe ndị dị mkpa dị ka njide na iji ya eme ihe ga-akọwa ezigbo ahụmịhe ọgụgụ na ngwaọrụ a na-enweghị ike ịgụta ma ọ bụrụ naanị na ị hụrụ ngwaọrụ ahụ ma jide ya maka nkeji ole na ole.
Anyị tụkwasịrị obi n’ọdịnihu nke ọgụgụ dijital na eReaders dị ka ngwaọrụ na nkwado maka ya. Anyị na-ege ntị na akụkọ niile na teknụzụ ọhụrụ etinyere na ngwaọrụ ndị dị n'ahịa.
Ndị otu ederede Todo eReaders bụ nke otu ndị ndị ọkachamara na eReaders na ndị na-agụ, ngwaọrụ na ngwanrọ metụtara ọgụgụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso n’otu otu, ị nwere ike zitere anyị fọm a ka ị bụrụ onye ndezi.
I am Project Manager na Blog akụkọ , omiiko banyere eReaders na onye na-agbachitere mbipụta dijitalụ, na-enweghị echezọ nke ọdịnala 😉 Enwere m Kindle 4 na BQ Cervantes 2 ma chọọ ịnwale Sony PRST3
Ihe mgbaru ọsọ m ugbu a bụ ime ka akụkọ ifo na teknụzụ malite n'oge m bi. N'ihi ya, iji na ihe ọmụma nke ngwaọrụ eletrik dị ka E-Reader, nke na-enye m ohere ịmara ọtụtụ ụwa ndị ọzọ na-ahapụghị ụlọ. Booksgụ akwụkwọ site na ngwaọrụ a dị mfe ma dịkwa mma, yabụ achọghị m ihe ọ bụla karịa Entanetị E-quality.
Onye editọ na nyocha geek. N'anya nke Ngwa na teknụzụ. "Echere m na ọ ga-ekwe omume ndị nkịtị ịhọrọ oke pụrụ iche" - Elon Musk.
Asturian, mpako si Gijon ka ọ bụrụ ihe ziri ezi. Nka na ụzụ Injinia n'ịhụnanya ndị na-agụ akwụkwọ kemgbe ha pụtara. Kindle, Kobo, ... Enwere m mmasị ịmara na ịnwale akwụkwọ ntanetị dị iche iche, n'ihi na ha niile dị iche na ha niile nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye.
Ebe ọ bụ na achọtara m Akwụkwọ Kindle bụ ihe ịga nke m maka agụ tupu m kwe ka ụbọchị ọzọ gafee. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ "fanaticism" maka eReaders m ga-anwa ịfefe na Todo eReaders.